इन्टरनेट/प्रविधि – Page2– MySansar
आज तपाईँले आफ्नो फेसबुक वालमा धेरै साथीको फोटो नेपाली अखबारमा छापिएको पेज देख्नुभयो होला। कोही त झुक्किनु पनि भयो होला। स्मार्ट हुनुहुन्छ भने थाहा पाइहाल्नुभयो होला, यो फेसबुक एपको काम हो भनेर। धेरैलाई रमाइलै भयो होला। तर अति भएपछि खति हुन्छ। फेसबुकको वालभरी खाली ‘काँधमा थप जिम्मेवारी’लेखिएका फोटो देखेपछि दिक्क पनि लाग्दो हो कतिलाई। त्यसो… Continue reading
आफ्नै कर्मचारीलाई थाहा नहुने टेलिकमको यो कस्तो विज्ञापन?
Posted on July 16, 2015 July 17, 2015 by mysansar
-तेज राई- आजको कान्तिपुरमा नेपाल टेलिकमको NT FTTH (Fiber to the home) को विज्ञापन छापिएको रहेछ। नयाँ प्रविधि भएकोले यो चाहीं ठीक होला भनेर म बसेको घरमा जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्न त्यहाँ दिएको नं. 01-4426900 मा फोन गरेँ। एक महिलाले फोन उठाइन् र ‘मलाई थाहा छैन यता फोन गर्नुस’ भनेर दुई वटा नम्बर… Continue reading
नेपालीहरु इन्टरनेटमा के सर्च गर्दा रहेछन्? अरुतिर त थाहा भएन तर गुगल वा अन्य सर्च इन्जिनमा कसैले केही टाइप गरेर खोज्यो र त्यसैमार्फत् माइसंसारमा क्लिक गरेमा त्यो यताबाट (वर्डप्रेसको सर्च टर्ममार्फत्) हेर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त त्यस्ता वाक्यबारे माइसंसारमा कुनै वाक्य पनि लेखिएकै हुँदैन। तर पनि कसरी उनीहरु सर्च गरेर आइपुगे, अनौठो लाग्छ। केही ज्यादै अश्लील… Continue reading